short poem – Kiran Kumar
March 14, 2019 March 14, 2019 Kiran Kumar
कुन सजिलो छ ?
बाँच्न वा मर्न ?
बाँच्न जति गाह्रो
अरु केही छैन भन्छन् ।
रहर यत्ति छ मनमा,
मर्नेहरूको पनि विचार बुझ्ने ।
तिमी राम्री हुन छोडिदेउ
आज भेटिएको छु ।
थाहा छ भोली भेटिन्न ।
खै के छ तिमीमा
नजरले एक झुल्को भएपनि
तिम्रा दृश्य चोर्न रहर गर्छ ।
यदि तिमीलाइ आपत्ति हो भने
तिमी राम्री हुन छोडिदेउ ।